पत्रकार महासंघ निर्वाचन अपडेटः सत्ता निकट प्यानल पछाडि, कहाँ–को विजयी ? - sajhamail - No 1 news portal from nepal. This is online site of sajha patrika weekly.
काठमाडौं। नेपाल पत्रकार महासंघको बुधबार देशैभर एकसाथ सम्पन्न मतदानको मतगणना जारी रहेको छ । अधिकांश स्थानमा सत्ता निकट गठबन्धन र माओवादी–काँग्रेस निकट लोकतान्त्रिक–व्यवसायिक गठबन्धनको प्यानल चुनावी मैदानमा थिए । हालसम्म प्राप्त प्रारम्भिक चुनावी नतिजाअनुसार लोकतान्त्रिक–व्यवसायिक गठबन्धन अगाडि देखिएको छ भने सत्ता निकट पत्रकारको गठबन्धन पछि परेको छ ।
गौतमका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी प्रेस चौतारीतर्फका उम्मेदवार बालकृष्ण अधिकारीले ५६ मत मात्र प्राप्त गर्न सफल भए ।
गौतम प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टरको एलायन्सतर्फको लोकतान्त्रिक प्रगतिशील गठबन्धनका उम्मेदवार हुन् ।
खुल्ला सचिवकी उम्मेदवार विकले ७८ मत प्राप्त गर्दा चौतारीका उम्मेदवार रामशरण दुलालले ७५ मत प्राप्त गरे । समावेशी सह–सचिवमा बानीयाँले सर्वाधिक १ सय ७ मत प्राप्त गर्दा चौतारीका उम्मेदवार रुपक कालिराजले कुल खसेको मतको ४७ मत प्राप्त गरे । खुल्ला सह–सचिव पदमा ३ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा गठबन्धनका उम्मेदवार पौडेलले ६८ मत प्राप्त गरे भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दीप्रेस मञ्च नेपालका उम्मेदवार राज सापकोटाले ४५ र चौतारीका उम्मेदवार देवराज पन्तले ४३ मत प्राप्त गरे ।
सिन्धुपाल्चोक शाखाको निर्वाचनमा जीवनप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको वाम गठबन्धन प्यानल विजयी बनेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा एमाले निकट प्रेस चौतारी र माओवादी केन्द्र निकट प्रेस संगठनको संयुक्त प्यानल थियो भने काँग्रेस निकट प्रेस युनियन छुट्टै चुनाव लडेको थियो ।
दोलखाको अध्यक्षमा दिपशंकर चौलागाईं निर्वाचित भएका छन् । प्रेस युनियन, प्रेस संगठन नेपाल र प्रेस चौतारी माधव नेपाल समूहको गठबन्धनबाट अध्यक्षका प्रत्यासी चौलागाईं निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्षमा निर्वाचिन चौंलागाईं प्रेस युनियन निकट हुन् भने उपाध्यक्षमा प्रेस चौतारी माधव नेपाल समूहका श्रीजनकुमार घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै महिला उपाध्यक्षमा सिर्जना खड्का (प्रेस संगठन), सचिवमा दिलबहादुर केसी (प्रेस संगठन) र कोषाध्यक्षमा नवीन खतिवडा (प्रेस चौतरी नेपाल समूह) निर्वाचित भएका छन् ।
काभ्रेको अध्यक्षमा प्रेस युनियनका बद्रीप्रसाद तिमल्सिना निर्वाचित भएका छन् भने सचिवमा युनियनकै कपिल कोइराला निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै उपाध्यक्षमा विनोदकुमार न्यौपाने निर्वाचित भएका छन् । महिला उपाध्यक्षमा सुनिता सापकोटा निर्वाचित भएकी छन् भने समावेशी सहसचिवको मत बराबर झरेको छ ।
समावेशी सहसचिवका जगतमान बल र रोजन तामाङले ५९–५९ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै सहसचिव खुल्लामा सरोज अधिकारी निर्वाचित भएका छन् । काभ्रे शाखामा अध्यक्ष सचिवमा युनियनले जित हासिल गरेपनि बहुमत सदस्य प्रेस चौतारीबाट निर्वाचित भएको जनाइएको छ ।
अछामको अध्यक्षमा खम्मसिंह खत्री विजयी भएका छन् । केन्द्रमा विपुल पोखरेल नेतृत्वको सो प्यानलले पूरै प्यानल जितेको छ । मत परिणामअनुसार उपाध्यक्षमा गीता कुँवर र रमेश रावत विजयी भएका छन् भने सचिवमा पूर्णबहादुर खड्का विजयी भएका छन् । यस्तै सहसचिवमा भवराज भण्डारी, सहसचिव समावेशीमा सरिता खड्का विजयी भएका छन् भने कोषाध्यक्षमा भवानी प्रसाद भण्डारी विजयी भएका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलप्रसाद भट्टराई, महिला उपाध्यक्ष गंगा लिङ्खिम, सचिव सुवास आचार्य, सहसचिव वसन्त पालुङ्वा निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै समावेशी सहसचिव संगिता कार्की, कोषाध्यक्ष मदन गौतम, महिला सदस्य छिरिङडोमा शेर्पा, आदिवासी जनजाति सदस्य आलोक माबोहाङ, दलित सदस्य जीवन कालिकोटे, समावेशी सदस्य सूर्य गुरुङ र सदस्य सिताराम गुरागाई निर्वाचित भएका छन् ।
गुल्मीको अध्यक्ष टोपलाल अर्याल विजयी भएका छन् । बुधबार भएको निर्वाचनमा ३० मत ल्याएर अर्याल अध्यक्षमा विजयी भएका हुन् । अर्यालका प्रतिद्वन्द्वी अनिल खत्रीले २७ मत प्राप्त गरेका छन् । अर्याल नेकपा एमाले माधव नेपाल समूह निकट प्रेस चौतारीका नेता हुन् । त्यस्तै उपाध्यक्षमा रेशमा कुँवर निर्वाचित भएका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी कृष्ण ज्ञवालीले १९ मत प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै महिला उपाध्यक्षमा सीता भण्डारी विजयी भएकी छन् । उनका निकटतम प्रतिद्न्द्वी अम्बिका आचार्यले २३ मत प्राप्त गरेकी छिन् । सचिवमा ३७ मतसहित प्रेम सुनार विजयी भएका छन् । अर्का सचिवका उम्मेद्वार ज्ञानबहादुर महताराले २१ म्त प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी सहसचिव खुल्लामा ४२ मतसहित तिलाचन पाण्डे, सहसचिव समावेशीमा ४० मतसहित तेजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा ३४ मतसहित कौरव खत्री विजयी भएका छन् ।